Alibaba nke Tmall Singles Day Day ritere ijeri yuan 200 n'ihe dị ka awa 14 na nkeji 21. Ntughari ikpeazụ bụ ijeri 268.4.
O were naanị sekọnd 96 maka Alibaba Group iji wepụta ijeri yuan 10 (ijeri $ 1.43) nke nnukwu ahịa ahịa n'etiti abalị nke ọnwa iri na otu nke ọnwa iri na otu nke ọnwa iri na otu ka njikọta ịntanetị na-ewe bonanza ịzụ ahịa kwa afọ n'ime afọ nke abụọ ya. Nke a dị mkpụmkpụ karịa nke afọ 11 gara aga iji gafee otu ọnụ ụzọ ahụ, na-egosi ike ike oriri na-eme ka akụ na ụba China.
"N'afọ a, oriri ọhụrụ na-egosi akara kachasị ukwuu site na mbipụta ya gara aga," ka onye isi oche na onye isi oche Alibaba bụ Daniel Zhang kwuru. "Ọ bụ karịa a ịzụ ahịa ememme-ọ bụkwa oge maka ụdị na-eto eto na-emekọ ihe na-eji ọkụ." Alibaba kwuru na ihe karịrị ụdị 200,000 na-esonye na gala 11th Singles Day gala, na-enye 1 nde ngwaahịa ọhụụ yana ihe karịrị nde 500 ndị ọrụ amụma na-emefu, 100 nde karịa afọ gara aga. O gbakwunyere na atụmatụ ndị ahịa echepụtara site na nkwalite na ikpo okwu na Kupọns nwere ike iru ijeri yuan 50.
Na mgbede nke okpukpu abụọ nke iri na abụọ, n'ihi ọnụ ọgụgụ dị ole na ole nke ụfọdụ ngwaahịa, ọtụtụ ndị na-echere ruo elekere 0:00 na mgbede ịzụta ngwaahịa ndị kachasị ọnụ. Tinye ngwaahịa ndị achọrọ na ụgbọ ibu azụmahịa tupu oge eruo, chịkọta Kupọns, ma chere maka oge ịbata. Na-egosi ekwentị mgbe ọ bụla ozugbo oge ruru, nsonaazụ nke ọnọdụ na-esonụ, na n'ikpeazụ, mgbe ụbọchị ịgba mgba gasịrị, n'ikpeazụ zụtara ngwaahịa niile achọrọ.
Ọ na-atọ ụtọ ijide ego ahụ n'onwe ya, mana cheta ka ị ghara ịga n'ihu ma ghara iso ìgwè mmadụ ahụ. Enwere ọnọdụ abụọ maka ngwongwo iri na iri na otu. Otu dị ọnụ ala ma nke ọzọ dị mkpa. Ọ bụ ezie na iri na abụọ ahụ dị mma, ị ga-edebe ihe kpatara gị! Kpochapụ ezigbo mkpa ịzụ ahịa gị.
Previous: Ogige Mba - Ugwu XueDou
Ọzọ: Anyị na-echere gị na Automechanika Shanghai